Enweghi ule zuru oke, ndi nyocha achoputala otutu okwu iji kọwaa nsogbu ndi puru ime. Njirimara na- ezo aka n'ókè nke nsonaazụ ụfọdụ na-akwado ụfọdụ nkwubi okwu ọzọ. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo na ọ na-enye aka ịkekọrịta ahazi dị ka isi anọ dị: njedebe nchịkọta akụkọ ọnụ, nkwado dị n'ime, ịrụ ọrụ nke ọma, na njedebe na-apụ apụ (Shadish, Cook, and Campbell 2001, chap. 2) . Ịkụzi echiche ndị a ga-enye gị nlele nlezianya maka ịkatọ na imezi nhazi na nyocha nke nnwale, ọ ga-enyekwara gị aka ikwurịta okwu na ndị nchọpụta ndị ọzọ.
Ntucha njedebe nchịkọta akụkọ na- eme gburugburu ma nchọpụta nchịkọta akụkọ nke nnwale ahụ mere n'ụzọ ziri ezi. Na onodu nke Schultz et al. (2007) , ajụjụ dị otú ahụ nwere ike ịdabere ma hà gụpụtara \_(p\_) ugbua ha n'ụzọ ziri ezi. Ụkpụrụ nchịkọta akụkọ dị mkpa iji hazie ma nyochaa nyocha ndị karịrị akwụkwọ a, mana ha agbanwebeghị na oge dijitalụ. Ihe gbanwere, Otú ọ dị, ọnọdụ data dị na nyocha dijitalụ emeela ohere ọhụụ dịka iji ụzọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ iji chọpụta heterogeneity nke ọgwụgwọ (Imai and Ratkovic 2013) .
Ezigbo oghere dị n'ime ebe a na-eme ma ọ bụrụ na e mere usoro nyocha ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ịlaghachi na nyocha nke Schultz et al. (2007) , ajụjụ gbasara ịba uru n'ime ụlọ nwere ike ịdabere na nhazi, nhazi ọgwụgwọ, na nhapụta nke ihe. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ichegbu onwe gị na ndị na-enyere aka nchọpụta agụghị eletrik eletrik anya. N'ezie, Schultz na ndị ọrụ ibe ya nwere nchegbu banyere nsogbu a, ha nwere ihe atụ nke mita gụọ ugboro abụọ; N'ụzọ dị mma, ihe ndị ahụ rụpụtara bụ ihe yiri nke ahụ. N'ikpeazụ, nchọpụta nke Schultz na ndị ọrụ ibe ya nwere oke ọhụụ, mana nke a abụghị mgbe niile: usoro dị mgbagwoju anya na ntanetị n'ịntanetị na-agbanyekarị nsogbu ndị na-enye ndị ezi omume ọgwụgwọ ziri ezi ma na-atụle ihe ọ ga-eme maka onye ọ bụla. N'ụzọ dị mma, afọ dijitalụ nwere ike inye aka belata nchegbu gbasara ezi obi dị na ya n'ihi na ugbu a dị mfe iji hụ na a na-enyefe ndị a na-enwerịrị ike ịnata ya na iji chọpụta ihe ọ ga-enye ndị niile so na ya.
Wụpụta ebe dị irè gburugburu egwuregwu ahụ n'etiti data na ụlọ ọrụ ahụ. Dịka a tụlere na isi nke 2, ihe ndị a bụ ihe ndị ọkà mmụta sayensị na-eche banyere ya. O bu ihe nwute, ihe omuma ndi a adighi adi anya mgbe nile. Ịlaghachi na Schultz et al. (2007) , nkwupụta nke na-emerụ ihe ndị na-elekọta mmadụ nwere ike ibelata ọkụ eletrik chọrọ ndị nchọpụta ịmepụta ọgwụgwọ nke ga-emegharị "usoro iwu ọha na eze" (dịka, emoticon) ma tụọ "ikike eletrik". Na nyocha ndị analog, ọtụtụ ndị nchọpụta mere nhazi nke onwe ha ma tụọ nha ha. Ụzọ a na-eme ka o doo anya na, dị ka o kwere mee, ihe ndị ahụ na-eme ka ihe ndị a na-adịghị ahụ anya na-amụ. Na nyocha dijitalụ ebe ndị na-eme nchọpụta na ndị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị gọọmentị na-enye ọgwụgwọ na iji usoro data iji chọpụta ihe ọ ga-eme, egwuregwu ahụ n'etiti nnwale ahụ na ihe ndị na-emeghị ihe nwere ike ọ gaghị adị mfe. Ya mere, m na-atụ anya ka ịrụ ọrụ nke ọma ga-abụ nchegbu ka ukwuu na nchọpụta dijitalụ karịa nyocha ndị analog.
N'ikpeazụ, njirimara nke dịpụrụ adịpụ na- emetụta gburugburu ma ọ bụrụ na ntụgharị nke nnwale a nwere ike ikpochapụ na ọnọdụ ndị ọzọ. Ịlaghachi na Schultz et al. (2007) , onye nwere ike ịjụ ma otu echiche a-inye ndị mmadụ ozi banyere ike ha na mmekọrịta ha na ndị ọgbọ ha na ihe mgbaàmà nke usoro iwu (dịka, emoticon) - ga-ebelata ikike ume ma ọ bụrụ na e mere ya n'ụzọ dị iche na ọnọdụ dị iche. Maka ọtụtụ nyocha nke ọma na nke ọma, nchegbu banyere mpụga nke ọma bụ ndị siri ike ịkwado. N'oge gara aga, arụrịta ụka ndị a banyere ikwesapụ aka n'èzí anaghị emetụta ihe ọ bụla karịa otu ìgwè mmadụ na-anọdụ n'ime ụlọ na-eche echiche ihe ga - eme ma ọ bụrụ na usoro ahụ emeela n'ụzọ dị iche, ma ọ bụ n'ebe dị iche, ma ọ bụ ndị dị iche iche . N'ụzọ dị mma, oge dijitalụ na-eme ka ndị na-eme nchọpụta gbanwee karịa nkọwa ndị a na-enweghị data na-atụle njedebe na-abụghị nke ọma.
Maka ihe si na Schultz et al. (2007) bụ ihe na-atọ ụtọ, otu ụlọ ọrụ aha ya bụ Opower na ndị ọrụ ya na United States na-etinye ọgwụgwọ n'ọtụtụ ebe. Dabere na imewe nke Schultz et al. (2007) , Opower kere ahazi Ụlọ Energy Report nke nwere nnukwu modulu abụọ: otu na-egosi ezinyere ọkụ eletrik nke ndị ezinụlọ ya na ndị agbata obi ya na emoticon na onye na-enye ndụmọdụ maka iweda ume ike (fig 4.6). Mgbe ahụ, na mmekorita ya na ndị nchọpụta, Opower gbara ọsọ na-achịkwa usoro nyocha iji nyochaa mmetụta nke Ụlọ Ọrụ Ike Ụlọ a. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ ndị a na-enweta n'ụzọ anụ ahụ-na-abụkarị site na ozi mgbapụta ochie - a na-eji ihe ngwaọrụ dijitalụ eme ihe n'ime ụwa nkịtị (dịka, mita ike). Ọzọkwa, karịa iji aka na-anakọta ozi a site na ndị na-enyere aka nyocha na-eleta ụlọ ọ bụla, a na-eme nchọpụta Opower na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ike na-enyere ndị na-eme nnyocha aka ịnweta ike ịgụ. N'ihi ya, a na-agba mbọ ịnweta ugwo uzo di iche iche na ugbua na ugwo ugwo.
Onu ogugu nke 4.6: Ebumnuche ulo ume di iche iche nwere Ngwadoro Ngwado nke ndi mmadu na usoro ihe eji eme ihe. Edeghachiri ya site na ikikere nke Allcott (2011) , ihe osise nke 1 na nke 2.
N'ime nyocha nke mbụ nke gụnyere 600,000 ezinụlọ si na 10 saịtị dị iche iche, Allcott (2011) chọpụtara na Ụlọ Energy Report ewetara ọkụ eletrik. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe si na nke ka ukwuu, ntụgharị mmụta dịgasị iche iche dị iche iche dị iche iche dị ka ihe yiri nke ahụ si na Schultz et al. (2007) . Ọzọkwa, n'ime nnyocha ndị ọzọ metụtara nde mmadụ asatọ ọzọ site na 101 saịtị dị iche iche, Allcott (2015) ọzọ chọpụtakwara na Ụlọ Energy Energy na-eji nwayọọ nwayọọ belata ikike eletrik. Ihe omimi a nke buru oke ibu gosiputara ihe omuma di nma nke agagh enwe ike ihu na nchoputa nke obula: otua nmetuta ya neme ka ihe omuma atu (njirimara 4.7). Allcott (2015) kwuru na ọdịda a mere n'ihi, ka oge na-aga, a na-eji ọgwụgwọ ahụ eme ihe maka ụdị ndị dị iche iche. Karịa nke a, ụlọ ọrụ ndị nwere ọtụtụ ndị ahịa na-elekwasị anya na-enwekarị ike ibute usoro ihe omume ahụ n'oge gara aga, ndị ahịa ha nabatara ọgwụgwọ ahụ. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị na-anaghị eche nche na gburugburu ebe obibi nakweere usoro ihe omume ahụ, ọ dị irè ka ọ daa. N'ihi ya, dịka nchọpụta na-eme ka o doo anya na usoro ọgwụgwọ na njikwa ahụ yiri nke ahụ, ịmepụta ihe na saịtị nyocha na-eme ka ọnụego nwere ike ikpochapụ site na otu ìgwè nke ndị na-eso ya na ọnụ ọgụgụ mmadụ n'ozuzu (chetaghachi na isi nke 3 gbasara nlele). Ọ bụrụ na saịtị ndị nyocha achọpụtaghi na-enweghị usoro, mgbe ahụ, ikpochapụ ọnụ-ọbụna site na nyocha zuru oke na nke e mere-nwere ike ịbụ nsogbu.
Ntụle nke 4.7: Nsonaazụ nke nyocha 111 na-enyocha mmetụta nke Ụlọ Nche Energy on the consumption of electricity. Na saịtị ebe e mepụtara usoro ahụ mgbe e mesịrị, ọ na-enwe obere mmetụta. Allcott (2015) ekwusi ike na isi isi ihe a na-eme bụ saịtị ndị ahụ na ndị ahịa ndị na-elekwasị anya na gburugburu ebe obibi nwere ike ịmalite usoro ihe omume ahụ. E si na Allcott (2015) , nọmba nke atọ.
Ejikọtara, 111 ndị a-10 na Allcott (2011) na 101 na Allcott (2015) dị ihe dị ka nde mmadụ 8.5 si n'akụkụ nile nke United States. Ha na-egosiputa na Ozi Ụlọ Nche na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ọkụ eletrik, nke na-akwado ihe nchọpụta mbụ nke Schultz na ndị ọrụ si n'ụlọ 300 na California. Naanị na ịmegharị ihe mbụ ndị a, nyocha ndị na-esote na-egosikwa na nha nke mmetụta dịgasị iche site na ọnọdụ. Usoro nyocha a na-egosiputa isi okwu abuo abuo banyere ule nke uzo di iche iche. Nke mbụ, ndị na-eme nchọpụta ga-enwe ike ịkwado nchegbu gbasara mpụga nke ọma mgbe ọnụahịa nke ịgba ọsọ ọsọ dị ntakịrị, nke a nwekwara ike ime ma ọ bụrụ na a na-atụle nsonaazụ ya site na usoro data data. Ya mere, ọ na-egosi na ndị nchọpụta kwesịrị ịnọ na nche maka àgwà ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na ndị dị mkpa bụ ndị edewororịrị, ma mezie nyocha n'elu nnukwu akụrụngwa dị ugbu a. Nke abụọ, nyocha nke a na-echetara anyị na ịnweta ugwoju ugbua abụghị nanị ntanetị; esiwanye, ana m atụ anya na ha ga-enwe ọtụtụ nha ọhụụ nke ndị nwere mmetụta dị na gburugburu ebe obibi wuru.
Ụdị njirimara dị anọ nke njedebe-njedebe na njirimara, njedebe nke dị n'ime, ịrụ ọrụ nke ọma, na njedebe nke mpụga-nye ndepụta nlezianya iji nyere ndị nchọpụta aka ịchọpụta ma ihe sitere na otu nnwale na-akwado nkwenye zuru oke. N'iji ya tụnyere oge analog-afọ, na nyocha afọ ole na ole, ọ ga-adịrị mfe iji nlezianya lelee njirimara na-abụghị nke ọma, ọ kwesịkwara ịdị mfe iji hụ na ekwesiri ime nke ọma. N'aka nke ọzọ, ọ ga-abụrịrị ihe ịma aka na-eme nyocha nke afọ ole na ole, karịsịa nchọpụta ugbo ala nke gụnyere mmekọrịta na ụlọ ọrụ.